एनआईसी एशियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत न्यौपाने ‘मेनेजर अफ द इयर’ अवार्डबाट सम्मानित - Media Dabali
एनआईसी एशियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत न्यौपाने ‘मेनेजर अफ द इयर’ अवार्डबाट सम्मानित
आइतवार, चैत्र २७ २०७८
काठमाडौँ- एनआईसी एशिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रोशन कुमार न्यौपाने ‘मेनेजर अफ द इयर–२०२२’ अवार्डबाट सम्मानित भएका छन् ।
व्यवस्थापनकर्मीहरूको सर्वोच्च निकाय नेपाल व्यवस्थापन संघले न्यौपानेले नेपालको व्यवस्थापन क्षेत्रमा पु-याएको योगदानको कदर गर्दै सो अवार्डबाट सम्मानित गरेको हो ।
शनिबार राजधानीको याक एन्ड यति होटलमा आयोजित समारोहमा न्यौपानेलाई उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै न्यौपानेले आफूलाई योग्य ठानेकामा व्यवस्थापन संघ, पुरस्कार छनौट समिति तथा व्यवस्थापन संघका पदाधिकारीप्रति कृतज्ञता जाहेर गरे ।
उक्त पुरस्कार सम्पूर्ण एआईसी एसियाकर्मीहरुमा समर्पण गरेका छन् । उनी यसअघि ‘प्रबल जनसेवा श्री (चतुर्थ)’, कर्पोरेट सीईओ अफ द इयर २०७८, बैंकिङ सीईओ अफ द ईयर–२०२१ बाट पनि सम्मानित भएका थिए । न्यौपानेको पाँच वर्षको नेतृत्व अवधिमा बैंकको कुल कर्जा करिब रू. ७३ अर्बबाट करिब ४ गुणाले वृद्धि भई रू. २७४ अर्ब पुगेको छ ।
त्यस्तै गरी निक्षेप संकलन तर्फ पनि रू. ८६ अर्बबाट करिब ४ गुणाले वृद्धि भई रू. ३०० अर्ब पुगेको छ । साथै बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी तर्फ करिब २ गुणाले वृद्धि भई रू.४१.४३ पुगेको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकका मुलुकभर ३५८ शाखा कार्यालय रहेका छन् । यस्तै ४७३ एटिएम, १०१ वटा विस्तारित काउन्टर एवं ८१ वटा शाखा रहित बैंकिङ्गमार्फत् समेत बैंकले सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
सोमवार, चैत्र २१ २०७८०८:५९:१३